पवित्र लुगा संग रंग Washes कि: सुझावहरू
यसलाई थप लोकप्रिय छुट्टी रंग बन्दैछ। उहाँले भारत हामीलाई आए। यो भाग लिन चाहने सबैसँग, पक्कै पनि रंग पवित्र लुगा यो सामग्री सन्तुष्ट छ कि छैन भनेर प्रश्न उठ्छ।
यो रंग कस्तो हुन्छन्?
लुगा यो सामग्री संग पवित्र सन्तुष्ट रंग, तपाईं पत्ता लगाउन यो के हो आवश्यक कि हेर्न। भारतीयहरुलाई अघि यसको तयारी लागि पाउडर सुकेको जडीबुटी र मसाले गर्न पीसने थियो। विज्ञान को विकास संग सबै सजिलो भयो। पछि तिनीहरूले खाना रंग संग मिश्रित आटा प्रयोग गर्न थाले।
मिति, यस्तो उत्सव दुनिया भर आयोजित गर्दा, रंग एक औद्योगिक मात्रा मा उत्पादन गर्न थाले, र प्रत्येक निर्माता आफ्नै को संरचना निर्धारण गर्छ। तर लाँड्री संग कठिनाइ लगभग कहिल्यै हुन्छ। मूलतः पेंट्स बोट-आधारित छन्।
लुगा यो सामग्री संग पवित्र सन्तुष्ट रंग, यो Tissues को विभिन्न प्रकार मा तरकारी पैच व्यवहार कसरी विचार लायक छ कि छैन भनेर हेर्न। तपाईं एक छुट्टी को नतिजा तपाईं पनि व्यवस्थापन हुनेछ, बेरी रस वा जडीबुटी आफ्नो टी-शर्ट संग दाग हटाउन सक्षम थिए भने। अक्सर, होली रंग को निर्माण को लागि यस्तो पदार्थ प्रयोग गरिन्छ:
सुन्तला वा पहेंलो रंग बेसार दिन्छ;
Phalaenopsis फूल पाउडर बैजनी रंग दिन;
Sandalwood निकाल्ने एक धनी रातो रंग दिन्छ;
नीलो रंग नील देखि निकाले।
छुट्टी लागि कसरी पोशाक गर्न?
पवित्र लुगा संग रंग Washes कि? हो। तैपनि, छुट्टी नयाँ फैंसी कुराहरूमा राख्न सिफारिस गरिएको छैन। यो जो फेंक धिक्कार छ, पुरानो टी-शर्ट वा टी-शर्ट थियो राम्रो छ। तथ्यलाई पूर्ण दाग हटाउन एक कुरा धोए गर्न धेरै पटक छ भनेर हो, र यो उपस्थिति deteriorate सक्छ। यसबाहेक, तिहार को विशिष्टता दिइएको, तपाईं जो त्यसपछि स्मृति मा बायाँ गर्न सकिन्छ एक सस्तो नयाँ जर्सी, खरिद गर्न सक्नुहुन्छ।
कसरी फोहोर रही आफ्नो लुगा रक्षा गर्न?
तपाईं पवित्र लुगा यो सामग्री सन्तुष्ट रंग, समीक्षा क्रमबद्ध बाहिर यो कुरा मदत गर्नेछ कि सोच भने। यो मात्र छुट्टी टाढा प्राप्त सफा टी-शर्ट सफल छैन स्पष्ट छ। निस्सन्देह, तपाईं रक्षा गर्न रेनकोट लगाउने गर्न सक्नुहुन्छ, तर तपाईँले मनोरञ्जन आनन्द भने?
घटनाको अनुभवी सहभागीहरू दिन सक्छ भन्ने मात्र सल्लाह, पानी र माटोको सम्पर्कमा जोगिन छ। ड्राई रंग को कपडे मा छैन धेरै खाने र किनभने यो धेरै सजिलो हुनेछ बाहिर धुन।
पवित्र लुगा संग रंग Washes कि? यस विषयमा सल्लाह धेरै छन्। अधिकांश मानिसहरू रंग को अवशोषण को डिग्री sewed छ के सामाग्री कुरा निर्भर सहमत हुनुहुन्छ। त्यसैले, कृत्रिम कपडे एकदम गाह्रो बाहिर धुन। त्यसैले, यो सनी र कपास बनेको छुट्टी आइटम मा लगाउन सिफारिस गरिएको छ। यो कपडा एक चिल्लो बनावट थियो, वा रंग कणहरु फाइबर पकड कठिन हुनेछ मनमोहक छ।
पवित्र लुगा र कसरी संग रंग Washes कि? पहिलो, गरेको परम्परागत विधिहरू बारी गरौं। यी निम्न समावेश:
को soiled वस्तुहरू ट्याग मा संकेतक को अनुसार, समातेर मोड, लुगा धुने मेसिन ड्रम मा लोड गर्नुहोस्। धेरै दुई घण्टा आधा वा, लुगा सफा बन्न तर्क।
रंग दाग र स्थलहरू यो लुगा धुने मेसिन पछि रहने भने, तपाईं दाग रिमुभर प्रयोग तिनीहरूलाई छुटकारा प्राप्त गर्न प्रयास गर्न सक्नुहुन्छ। कुरा प्राकृतिक सामाग्री बनेको छ भने, सामान्य सेतो आधारित ब्लीच फिट।
अर्को चरण लुगा धुने लागि पाइपलाइन प्रयोग हुनेछ। तिनीहरूले बन्द खियाले, त्यसपछि होली को रंग संग पनि थप त दाँया मा सफा र सक्षम छन् भने।
तिनीहरूले कृत्रिम डिटर्जेंट कुराहरू लागि कपडा बिगार्छ किनभने तर, प्रयोग गर्न सकिँदैन।
पवित्र लुगा र कसरी यो धुन संग रंग Washes कि? यो भारतीय तिहार को धेरै सदस्यहरु लोक उपचार प्रयोग गर्न रुचाउँछु। उच्च गुणस्तरीय दाग removers कहिलेकाहीं रूपमा सबैभन्दा सरल टी-शर्ट वा ट्यांक शीर्ष धेरै खर्च गर्न सक्छन् भन्ने तथ्यलाई। तर हजुरआमा गरेको व्यञ्जनहरु सामान्यतया एकदम सस्तो लागत छन्। यसलाई उल्लेख लायक छ हो:
यो लुगा धुने पानी लागि बेसिन भर्न र प्रति लीटर 1 चमचा को दरमा यसलाई मा सोडियम क्लोराइड पतला। को granules पूर्ण भंग गर्दा एक तरल मा दाग लागेको कुरा डिप र आधा एक घण्टा यसलाई छोड्नुहोस्। यो soaking पछि पाउडर वा साबुन संग लुगा धुन आवश्यक छ। तपाईं पनि लुगा धुने मेसिन प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। मुख्य रूप तरकारी मूल को पेंट्स, त्यसैले नुन सामना गर्नुपर्छ।
न्यानो पानी5लिटर मा, अमोनिया दुई चम्मच पतला। , आधा एक घण्टा वस्तु भिजेको त्यसपछि धुन अलि कंडीशनर कचौरा थप्न। तपाईंले केही मिनेटमा आवश्यक अर्को कुरा, कुल्ला। यदि कुनै पनि स्थलहरू थिए, तिनीहरूले थप हुन अमोनिया मा डूबा एक कपास swab RUB गर्न आवश्यक छ।
पानी मा हाइड्रोजन पेरोक्साइड पतला। प्रति तरल को लीटर चम्मच सक्रिय पदार्थ आवश्यक छ। को soiled वस्तु मा आधा घण्टा स्नान मा, कुल्ला, र त्यसपछि धुने मेसिन पठाउनुहोस्।
तपाईं अभागी छौं, र रंग छुट्टी समयमा माटोको संग भिजेको वा मिश्रित छ भने, frayed चक र साधारण साबुन को gruel पकाउन गर्ने प्रयास गर्नुहोस्। स्पट मा उत्पादन लागू, बिस्तारै यसलाई दल्नु, र मिनेट 40. छोड्न कि पछि, तपाईं कुल्ला र हात वा मिसिन द्वारा धुन आवश्यक कुरा।
это веселый и радостный праздник. होली - खुसीसाथ र आनन्दित छुट्टी। तपाईं आफैलाई किनभने लुगा बिगार्छ गर्न जोखिम सकारात्मक भावना अस्वीकार गर्नु हुँदैन। त्यहाँ एक कपडा संग रंग बन्द धुन धेरै तरिकाहरू छन्।
Krag - यो बच्चाहरुका लागि र sportsmen लागि सहायक छ
तल्ला गर्न गर्मी पोशाक - एक फैशन तत्व गर्मी दराज
हामीलाई रोक्न भनेर 10 गल्ती सिद्ध हेर्न
"कसरी भयानक," - हास्य शृंखला
को गर्मी लागि नङ रंग कसरी सुशील गर्न?
मनपर्ने मान्छे chokeberry। यसको फल को उपयोगी गुणहरू।
Yew-रूख निकुन्ज। सोची मा Yew-रूख निकुन्ज
जेल र जेल-वार्निशको आधार: कोडी प्रोफेसर, रबड आधार, ब्लुस्की। मैनीक्योरको आधुनिक प्रविधि